thoughts | YANGON LITERARY MAGAZINE
Posted on January 10, 2017 by Kcmmaung	• Leaveacomment
By Millenial May Thu Anyone who has studied and lived outside of Myanmar has returned to find that their culture is – and maddeningly, has always been – an inherently racist culture. Most days we are subject to casual conversations wherein any person who happens to have dark skin is immediately condemned as “evil”. Furthermore, … Continue reading →
Posted on January 7, 2017 by Kcmmaung	• Leaveacomment
Words by Lamai San Latt တွေးခေါာမှုတွေ မြင့်မားဖို့ ငါတို့အားလုံးပညာကို သင်ချင်တယ် ။ ငါတို့ပန်းတိုင်လှပဖို့ ငါတို့အားလုံးပညာကို တန်ဖိုးထားတယ် ။ ငါတို့အနာဂတ်ကို လမ်းပြပေးမဲ့ အမှောင်ခရီးကို ထွန်းလင်းပေးမဲ့ ပညာအလင်းတန်းကို လိုချင်တယ် ။ အမှောင်တွေဘဲ ဖုံးအုပ်နေတဲ့ စိတ်နှလုံးကို ပညာအလင်းနဲ့ ကုသချင်တယ် ။ ပစ်လွတ်လိုက်တဲ့ ကျည်ဆံမိုင်းတွေကြား တစ်ဘဝလုံး နစ်မြုပ်နေရတော့မယ် ။ မျော်လင့်ချက်တွေ ပျက်စီးဖို့ ရောက်ခဲ့တာလား တိုက်ပွဲရယ် ။ တို့အားလုံးရဲ့ ဘဝဟာ အမြဲပြေးနေရတော့မယ် ။ တို့တွေအားလုံး ပညာအလင်းရောင်ကို မြင်ဖူးချင်ပြီ သင်ယူချင်ပြီ ။ ပူလောင်နေတဲ့နှလုံးသားကို ပညာအလင်းနဲ့ အေးမြချင်ပြီ ပညာအလင်းနဲ့ သံယောဇဉ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက် တို့အားလုံးရဲ့ မျော်လင့်ချက်တွေ ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီ ။ ပညာအလင်းကိုတော့ … Continue reading →
Posted on December 30, 2016 by Kcmmaung	• Leaveacomment
Words by Inzali Most people who have grown up inaBurmese household will agree that emotional blackmail isastaple in our social discourse. I can bet that you have either seen, heard of, or even experienced emotional blackmail yourself. How do you know? Let’s identify what emotional blackmail is. According to Out of … Continue reading →
Posted on October 21, 2016 by Kcmmaung	• Leaveacomment
By လွမ်းတေးချို လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်က ကားပျက်ကြီး ကားပေါ်မှာ ဘယ်သူပါလဲ မမေးနဲ့ အကုန်ပါတယ်။ ကလေး ရော ခွေးရော အကြွေးနဲ့ လူတွေ ကြွေးတင်ရင် ရှင်ဘုရင်ကို ဆပ်စေချင်တဲ့သူတွေ ဘယ်သွားမလဲ မမေးနဲ့ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ဆီလောက်သလား ဒီခရီးနီးသလား ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ်သောက်ရမည့် အရက်တွေ ကိုယ့်အဖြစ်နဲ့ကိုယ် မူးရမည့် ရက်တွေ ယာဉ်မောင်းပြောင်းပြီပြောတယ် ကားပေါ်က ပါးစပ်ကြမ်းတဲ့ စပယ်ယာ ကို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဘယ်သူပိုင်ရှင်လဲ မမေးနဲ့ စာနဲ့ပေနဲ့ပြောရင် ခရီးသည်တွေပိုင်တဲ့ကား လက်တွေ့ မှာတော့ ဇာတ်လမ်းကိုပြီးအောင် ကြည့် ဘာမပြီးခင် ဘာမမြင်စေနဲ့ဆိုသား တံခါးတွေဖွင့်ပြီပြောတယ် လေ၀င်ပေါက်ထဲမှာ သဲတွေ၊ ဖွဲတွေ ၊ ဇကွဲတွေ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ လေကောင်းလေသန့်တွေ ၊ ရှုခင်းလှလှတွေ မကြုံချင်လည်း ကြုံ ရမည့် အကျည်းတန်မြင်ကွင်းတွေ … Continue reading →
Thoughts on Burmese Nuns
Posted on July 18, 2016 by mandyethmaximus	• Leaveacomment
By Thame Deawy Thaw “No, darling. Girls are not allowed to go further up from this point,” said Mother, stopping me from following Father who continues to climb up the stairs to reach high altar of ShweDagon Pagoda. “No, darling. Ifagirl climbs up toward the top of the stupa, she will never … Continue reading →